Arabo zazavavy izay nahasarika ny Fotsy ry zalahy. Yahoo Answers
Eny ary ka aho ny Silamo Arabo tovovavy aho ary hitafy hijab (lohany fehy). Fa eto dia ny zavatra, dia izaho ihany no nahasarika ny Fotsy ry zalahy. Ny tena olana dia Fotsy ry zalahy tsy hanatona ahy. Heveriko fa satria izy ireo dia mihevitra loatra aho ara-pivavahana na izaho ihany no tapa-kazo ny karazana. Na angamba izy mieritreritra izany ho sarotra loatra. Tsy. Eny ary ka aho ny Silamo Arabo tovovavy aho ary hitafy hijab (lohany fehy). Fa eto dia ny zavatra, dia izaho ihany no nahasarika ny Fotsy ry zalahy. Ny tena olana dia Fotsy ry zalahy tsy hanatona ahy. Heveriko fa satria izy ireo dia mihevitra loatra aho ara-pivavahana na izaho ihany no tapa-kazo ny karazana. Na angamba izy mieritreritra izany ho sarotra loatra.
Arabo foana ry zalahy namely ahy ary indraindray Mainty ry zalahy manao koa, fa izaho fotsiny dia tsy ara-batana tia azy ireo. Manao fotsy ry zalahy tena hahita Afovoany Atsinanan’i Afrika Avaratra ny vehivavy tsara tarehy. Raha izany, ahoana no ho avy na oviana na oviana izy ireo manatona ahy. Ahoana no ahafahako aoka ho fantany aho liana tsy ho diso mazava loatra momba izany? Koa na iza na iza no manana soso-kevitra mikasika izay raha ny marina dia afaka mivory ny sasany. Aho dia mieritreritra momba ny miezaka online mampiaraka, fa toy ny ala nenina farany. Nahatsikaritra koa aho fa tsy mitovy fihodirana mampiaraka ny fanambadiana dia be kokoa ny fahita any ANGLETERA ary ireo faritra hafa any Eoropa noho izany dia ao amin’ny Firenena. Fotsy ry zalahy misy toa manana olana manakaiky ny vehivavy samy hafa fiaviana. Izany fotsiny ny fandinihana ny ahy na dia mety ho diso. Na izany na tsy, misy toro-hevitra na mitovy ny zavatra niainany dia ho nankasitrahany. Noho izany, raha te-fotsy ry zalahy fa efa maha-Silamo, any Bosnia Herzegovina. Misy be dia be ny Miozolomana fotsy hoditra ry zalahy any. Ianao tsy manana olana amin’ny fitadiavana ny vady satria ny ankamaroan’izy ireo dia Silamo. Miozolomana aho, Azia ary nahita tiorka lehilahy manintona noho ny iray hafa firazanana. Nefa tsy miraharaha ny momba ny hoavy vady ny hazakazaka. Raha izahay avy ny mitovy foko, aho hanaiky azy tsy mitaraina. Na izany na tsy izany, tsara vintana amin’ny fitadiavana ny ho avy fotsy vadiny. Izaho no tena ho teny arabo ny ankizivavy. Velona aho akaikin’ny Dearborn MI sy mahita be dia be. nandeha tany amin’ny oniversite izay izy ireo no maro an’isa angamba. Te hiteny aho fa ny antony dia mafy satria isika dia tsy mahalala hoe aiza no manomboka. tsy fantatro raha izany no mangatsiaka ny fomba fiasa sy milaza zavatra hafa noho ny zavatra plutonic. manao teny arabo ankizivavy daty na manana firaisana ara-nofo. Tena tsy mahalala tsara ny momba ny kolontsaina mba hahatakatra. ho ahy, izaho dia ho zava-kanto sy ny hira. Tiako ny mandeha mivoaka sy ho fantatrao fa tsy afaka misotro toaka raha izaho no nifidy izaho sy ny mifoka rongony, koa, dia tsy mandainga. ny zavatra tena tsara tarehy mahazatra mba hahatakatra fa ny kolotsaina Arabo dia tsy hifangaro amin’ny zava-mahadomelina.
Aho tsy handoro na ny resy
Dia ny mpisolo toerana hampianarana, manana ny mari-pahaizana amin’ny oniversite, milalao mozika saha sy hanao zavatra maro izay downright mahafinaritra sy mahaliana. ve izany karazana fiainana handrindra ny amin’ny teny arabo ny vehivavy? Izaho tena liana. Tsy fantatro ny momba rehetra Arabo, tena matahotra ny Silamo sy ny fomba amam-panao. Izaho manokana dia mahafantatra ny havany izay manambady ny Silamo izay tena tsara ho azy talohan’ny fanambadiana fa avy eo nanomboka mitondra azy amin’ny fomba hafa, fa tsy hamela azy ho any ivelany fotsiny, dia nangataka azy mba hanao ny efitra lamba ary tsy mamela azy amin’ny latabatra amin’ny olona. Fantatro tsy ny rehetra ny Arabo ratsy ry zalahy, fa maro ny tovovavy no matahotra ny tantara toy io. Hitako be dia be ny Afovoany Atsinanan’i Afrika Avaratra ny vehivavy tsara tarehy. Fa ny ankamaroan’ny ankizivavy avy izay fototra mazàna no tena henjana tena ara-pivavahana ny ray aman-dreny sy ny rahalahy izay mandà tsy handefa ny zanany vavy rahavavy daty teratany Eoropeana ry zalahy (izay tsy Silamo), na dia miaina ao amin’ny firenena. Ary raha toa izy ireo ka mamela azy aho, dia tsy mbola mikasa ny hanaraka ny finoana Silamo, izay hita ho ny fepetra takiana. Be loatra ny olana sy ny maro loatra ny fahasamihafana ara-kolontsaina, mba ho marin-toetra. Raha toa ka leo mihaino ny bandy namana whine momba mila asehontsika amin’ny mpiara-miasa ny fotoana sy andro izany dia tena tokony ho no manome azy izany boky Tao ny Badass boky writhed by Josoa Pellicle, ny fiainana mpampianatra eto an-tany ny olon-tiany. Izy no niteraka ny aingam-panahy avy amin’ny fiainana tsy mahita olana amin’ny tovovavy sy ny tsy manana tetikady momba ny fomba marina izany kanefa, rehefa tsy tapaka ireo tsy fahombiazana mba hisarihana ny ankizivavy, dia nahita izy, dia tsy izy raha mbola tsy mahafantatra izany araka ny tokony ho hevitra mba hanatanterahana ny zava-misy, dia hita fa izy no tsy nanana eritreritra ny zavatra tsy tokony atao. Sarotra ianao rehefa rehetra dia nandrakotra ary koa tsotra. Ny olona tsy tia tena vehivavy izay hanafenana ny fotoana rehetra. Ary eny, ny olona tsy tia loatra amin’ny fivavahana ny olona. Hilalao azy soa aman-tsara dia tsy hahazo anao ny tovovavy. Vehivavy mankasitraka ny fahatokian-tena, fahasahiana sy ny fikirizana. Ataovy ny dingana voalohany
← Ny toro-hevitra amin'ny Mampiaraka ny Vehivavy Arabo Fahasalamana tari-dalana
Rosiana ny tovovavy ho an'ny manan-karena ny Arabo →